Akụkọ - Ọtụtụ ihe gbochiri mmepe ụlọ ọrụ kemịkal ọgbara ọhụrụ na China
Ọtụtụ ihe na-egbochi mmepe nke ụlọ ọrụ kemịkal coal na China
Ka ọ dị ugbu a, ntiwapụ ọhụụ nke pneumonia ọhụrụ nwere mmetụta dị ukwuu n'usoro akụ na ụba ụwa na ọrụ akụ na ụba, mgbanwe dị ukwuu na geopolitics, na nrụgide na-arịwanye elu na nchekwa ike. Mmepe nke ụlọ ọrụ kemịkal ugbu a na mba m bara nnukwu uru.
N'oge na-adịbeghị anya, Xie Kechang, osote onye isi nke Academylọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Injinia na China na onye nduzi nke Laboratory Key nke Coal Science and Technology nke Ministri Mmụta nke Mahadum Taiyuan nke teknụzụ, dere edemede na ụlọ ọrụ kemịkalụ kemịkal ọgbara ọhụrụ, dịka akụkụ dị mkpa nke usoro ume, ga "akwalite mmepụta ume na mgbanwe oriri na iwulite obere carbon, usoro ume na nchekwa nke ọma" bụ usoro nduzi n'ozuzu, yana isi ihe chọrọ nke "ọcha, obere carbon, nchekwa na arụmọrụ" bụ isi ihe achọrọ maka mmepe nke ụlọ ọrụ kemịkal ọgbara ọhụrụ dị n'oge "14th afọ ise atụmatụ". Ozi "nkwa isii" chọrọ ka usoro ike dị ike na-enye nkwado maka mweghachi zuru oke nke mmepụta yana ibi ndụ yana mgbake nke akụ na ụba China.
Ọnọdụ nhazi nke ụlọ ọrụ kemịkal na-ere ọkụ na mba m amabeghị nke ọma
Xie Kechang gosipụtara na mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe, ụlọ ọrụ kemịkalụ na-ere ọkụ na mba m enweela nnukwu ọganihu. Nke mbu, onu ogugu zuru oke n'uwa dum, nke abuo, onodu oru nke ngosi ma obu ulo oru mmeputa ka emeela ka o di nma, nke ato, akuku nke teknụzụ di na mba di elu ma obu na-eduga. Agbanyeghị, a ka nwere ụfọdụ ihe mgbochi na mmepe nke ụlọ ọrụ kemịkal kemịkal ọgbara ọhụrụ na mba m.
Ọnọdụ nhazi nke mmepe ụlọ ọrụ edoghị anya. Coal bụ isi ike nke afọ ojuju China. Ndị mmadụ enweghị mmata banyere ụlọ ọrụ kemịkalụ kemịkalụ ọgbara ọhụrụ na ụlọ ọrụ kemịkal dị elu nwere ike ịdị ọcha ma rụọ ọrụ nke ọma, ma jiri obere ụlọ ọrụ na-anọchi ụlọ ọrụ petrochemical, wee "de-coalization" na "isi kemịkal na-esi isi" apụta, nke na-eme ka ụlọ ọrụ kemịkal na-ere ọkụ na China. putara ighe nke oma putara ihe amaghi nke oma, nke butere mgbanwe mgbanwe na mmetuta nke ndi ulo oru na-agba "ala ndi ozo".
Ihe ezughị oke metụtara ọkwa nke asọmpi ụlọ ọrụ. Chemicallọ ọrụ ndị na-ere ọkụ na-ere ọkụ na-ere ọkụ nwere ume dị ala yana njikwa ntụgharị akụ, yana nsogbu nchekwa gburugburu ebe obibi nke "mbibi atọ", ọkachasị mmiri mmiri kemịkal, pụtara ìhè; n'ihi mgbanwe dị mkpa nke hydrogen (ntụgharị) mmeghachi omume na teknụzụ kemịkal a na-emepụta n'oge a, mmiri na-ebupụta na ikuku carbon dị elu; N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa ndị bụ isi, mmepe na-ezughị ezu nke ngwaahịa ndị a nụchara anụcha, ndị iche iche, na nke pụrụ iche dị ala, uru nke ụlọ ọrụ ahụ apụtaghị nke ọma, asọmpi adịghịkwa ike; n'ihi ọdịiche dị na njikọta teknụzụ na njikwa njikwa, ọnụahịa ngwaahịa dị elu, yana arụmọrụ zuru oke ka dị mma wdg.
Mpaghara mpụga na-egbochi mmepe ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọnụ mmanụ na ọkọnọ, ikike ngwaahịa na ahịa, inye oke ego na ụtụ isi, inye ego na ịlaghachi azụ, ikike gburugburu ebe obibi na iji mmiri eme ihe, ikuku gas na mbelata ikuku bụcha ihe niile dị na mpụga nke na-emetụta mmepe ụlọ ọrụ kemịkalụ mba m. Otu ihe ma ọ bụ ihe kachasị mkpa na oge ụfọdụ na mpaghara ụfọdụ abụghị naanị na-egbochi mmepe ahụike nke ụlọ ọrụ kemịkal na-ere ọkụ, kamakwa ọ na-ebelata ikike akụnụba nke akụ na ụba nke ụlọ ọrụ guzobere.
Kwesịrị imeziwanye arụmọrụ akụ na ụba na ikike ịme ihe egwu
Nchedo ike bụ okwu zuru oke na nke metụtara usoro akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze nke China. N'ịbụ nke nwere mgbagwoju anya nke ụlọ na nke mba dị iche iche, mmepe mmepe ume nke China chọrọ mmepe na-arụ ọrụ nke teknụzụ iwepụ mmetọ na-arụ ọrụ dị elu, teknụzụ na-achịkwa ọtụtụ nchịkwa, na ọgwụgwọ mmiri mmiri. Teknụzụ na-ebugharị ebumpụta ụwa na teknụzụ ojiji atọ "atọ n'iyi", na-adabere na ọrụ ngosipụta iji nweta ụlọ ọrụ ngwa ngwa o kwere mee, ma n'otu oge ahụ, dabere na gburugburu ebe obibi, gburugburu ebe obibi mmiri na ikike nke gburugburu ala, jiri sayensị wepụta ụdị ọkụ a. ụlọ ọrụ ike kemịkal. N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa ịtọlite ​​ma melite ikike sitere na coal na ụkpụrụ nrụpụta dị ọcha na kemịkal metụtara usoro nchekwa gburugburu ebe obibi, melite usoro njikwa njikwa dị ọcha nke nnabata ọrụ, nlekọta zuru oke na nyocha na nyocha, kọwaa ọrụ nlekọta, mepụta usoro ịza ajụjụ, ma duzie ma na-ahazi ike sitere na coal Dị ọcha mmepe nke ụlọ ọrụ kemịkal.
Xie Kechang tụrụ aro na n'ihe banyere mmepe nke obere carbon, ọ dị mkpa ịkọwapụta ihe ụlọ ọrụ kemịkalụ ike ọkụ na-arụ na nke ọ na-anaghị eme na mbenata carbon. N'otu aka, ọ dị mkpa iji uru dị elu nke ịta ahụhụ CO na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ kemịkalụ ike ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-enyocha teknụzụ CCUS. Ntinye nke oma nke CCS di elu na nyocha nke oma na mmepe nke teknụzụ CCUS dika CO idei mmiri na CO-to-olefins iji gbasaa itinye n'ọrụ nke ihe CO; n'aka nke ọzọ, ọ gaghị ekwe omume "itufu na òké" ma leghara usoro omume nke ọrụ ọkụ sitere na kemịkalụ kemịkalụ elu carbon, na igbochi mmepe sayensị nke ụlọ ọrụ kemịkalụ ike ọkụ na-achọ teknụzụ na-emebi ihe site na mkpuru mmiri nke mbelata mbupute na isi iyi na nchekwa nchekwa na arụmọrụ ka mma, ma mebie ụdị carbon dị elu nke ụlọ ọrụ kemịkalụ na-emepụta ọkụ.
N'ihe banyere mmepe dị mma, gọọmentị kwesịrị ịkọwapụta mkpa usoro na ọnọdụ ọrụ ụlọ ọrụ nke kemịkalụ ike sitere n'okike dị ka “okwute ballast” maka nchekwa nchekwa obodo m, ma gbasie mbọ ike na mmepe dị ọcha na nke ọma nke ọma na itinye n'ọrụ kol dị ka ntọala na ọrụ mbu nke mgbanwe ume na mmepe. N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa iji duzie usoro nke ike na-ebu agha na atụmatụ atụmatụ mmepe mmepe kemịkalụ, na-eduzi teknụzụ teknụzụ na-akpaghasị, ma na-akwalite ọrụ ike ọkụ na ụlọ ọrụ kemịkalụ iji jiri nwayọọ nwayọọ nweta ngosipụta nkwalite, azụmahịa na-agabigaghị oke na ụlọ ọrụ zuru oke; chepụta usoro dị mkpa maka usoro akụ na ụba na nke ego iji meziwanye mmejuputa atumatu akụ na ụba na asọmpi nke ụlọ ọrụ, mepụta ikike mmanụ na gas na-agbanwe ike, wee mepụta ezigbo mpụga maka mmepe nke ụlọ ọrụ kemịkalụ na-ere ọkụ n'oge a.
N'ihe banyere mmepe dị elu, ọ dị mkpa iji nlezianya rụọ ọrụ nyocha na ngwa ọrụ mmepụta ihe nke teknụzụ kemịkal dị elu dị na teknụzụ dị ka njikọ kpọmkwem nke olefins / aromatics, coal pyrolysis and gasification Integration, ma ghọta ọganiihu na ike ịzọpụta na mbelata oriri; jiri ike kwalite ụlọ ọrụ kemịkalụ ume na ụlọ ọrụ na mmepe nke ike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, na-agbatị usoro ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-ewepụta njedebe dị elu, njirimara, na kemịkalụ dị elu, ma melite arụmọrụ akụ na ụba, iguzogide ihe egwu na asọmpi; miewanye njikwa nke ikike ịchekwa ike, na-elekwasị anya n'ịkwalite usoro nke teknụzụ nchekwa ike dị ka teknụzụ teknụzụ ọkụ ọkụ dị ala, teknụzụ na-echekwa mmiri na mmiri na-echekwa mmiri, na-ebuli teknụzụ usoro, ma melite arụmọrụ akụ na ụba. (Meng Fanjun)
Nyefee si: China Industry News
Post oge: Jul-21-2020
Ekwentị: + 86-574-62581528
Ekwentị: + 86-574-62589038
Nchoputa Maka Pricelist
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa. Ajụjụ Maka Pricelist
Kọwaa ọrụ, wusi ume ike ...
Nyocha arụmọrụ nke ogbako ọ bụla bụ otu n'ime usoro ụlọ ọrụ yana mbọ dị mkpa na mgbanwe ụgwọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ naanị ụzọ iji belata ọnụ ahịa nke ọma ma melite asọmpi ...
Nnyocha pụrụ iche maka enyi na enyi ...
Iji mejuputa atumatu ihe a choro n'ime afo ato maka imezi ihe puru iche nke nchekwa kemikal na nchekwa oku, na iji gbochie ma chịkwaa ihe egwu di iche iche na eche ihu "abụọ prioriti ...
Ọtụtụ ihe na-egbochi mmepe nke ...
Ka ọ dị ugbu a, ntiwapụ ọhụụ nke pneumonia ọhụrụ nwere mmetụta dị ukwuu n'usoro akụ na ụba ụwa na ọrụ akụ na ụba, mgbanwe dị ukwuu na geopolitics, na nrụgide na-arịwanye elu na nchekwa ike. Mmepe nke mode ...